Mpandraharaha fizahan-tany amerikana: Aza avela hanakana ny drafitry ny fialan-tsasatrao ny fanakatanan'ny governemanta
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Mpandraharaha fizahan-tany amerikana: Aza avela hanakana ny drafitry ny fialan-tsasatrao ny fanakatanan'ny governemanta
Raha mbola manohy mametraka firaketana ho an'ny faharetana ny fanakatonana ataon'ny governemanta amerikana, dia nahita fitomboan'ny fitaintainan'ny mpanjifa ity mpandraharaha mpizahatany ity.
Raha mbola manohy mametraka firaketana ho an'ny faharetana ny famaranana ataon'ny governemanta amerikana dia nahita fiakaran'ny fitaintainan'ny mpanjifa ity mpandraharaha mpizahatany ity mandritra ny fotoana maro izay mpandeha matetika no mitady hamandrika ny fialan-tsasatry ny lohataona sy fahavaratra.
Mpandraharaha mpizahatany efa za-draharaha no miandry sy miomana amin'ny zavatra tsy ampoizina. Orinasa fizahan-tany malaky dia mandray ny tsy ampoizina ary mahita fotoana mety amin'ny drafitra hafa.
Satria ny valan-javaboary no ifantohany voalohany amin'ity orinasa ity, takatra fa misy olona mitaintain-doha ary tsy te hanao drafitra fialantsasatra mihitsy.
"Voalohany indrindra, ity fanidiana farany nataon'ny governemanta ity dia TSY tokony hanidy ny drafitry ny fialan-tsasatrao," hoy i Dan Austin, mpanorina sy talen'ny Montana monina Austin Adventures. “Ny firesahana amin'ireo mpandeha alimniôna sy ireo mpanjifa ho avy amin'ny alàlan'ny finday no toro-hevitra voalohany tokony tsy hikoropaka sy hanahy. Nahita an'io isika teo aloha ary hilamina ny zava-drehetra. ”
Austin dia nanondro ny fanidiana ny governemanta 17 andro teo aloha tamin'ny faramparan'ny taona 2013. "Ny làlan-kizorantsika dia nahatonga anay hitsidika ny Valan-javaboary Bryce Canyon saingy nakatona io. Tsy fantatr'ireto vahiny ireto fa nanana drafitra fifanarahana hitsangatsangana sy hitsidika ny manodidina ny Kodachrome Basin State Park izahay, fahagagana ara-jeolojika mahatalanjona 20 kilaometatra atsinanana. Vahiny marobe no nilaza fa io no zava-nisongadina tsy nampoizina tamin'ny diany, ”hoy ny fanazavan'i Austin.
Ny ankamaroan'ny dia ataon'ny orinasa ao amin'ny National Parks of the West sy ny manodidina dia mitranga mandritra ny lohataona, fahavaratra sy fararano. Na dia tsy nisy fiantraikany mivantana tamin'ny fanakatonana aza ireo dia ireo - ankoatry ny fitaintainanana eny an-tsena - mino i Austin fa tsy azo inoana ny mety hisian'ny korontana politika hiroso amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona. Na izany aza, raha ilaina izany dia vonona izy ireo ny hamaly raha toa ka mila izany ny toe-javatra.
Ity fanakatonana governemanta ity dia tsy nitovy tamin'ny taloha. Raha ny voalazan'ny National Parks Conservation Association, "ny Departemantan'ny Atitany dia nandidy ny mpiasa ao aminy, ao anatin'izany ny mpiasan'ny National Park Service, mba hitazomana ny valan-javaboary raha mbola mankatoa ny lalàna. Midika izany fa manodidina ny ampahatelon'ny valan-javaboary eto amintsika no mikatona tanteraka, ao anatin'izany ny toerana toy ny tranon'ny filoham-pirenena, tranombakoka ary toerana ara-kolontsaina misy trano azo mihidy. Misokatra hatrany ny vavahady amin'ny valan-javaboary maro hafa, saingy vitsy kosa raha misy mpiasa vonona hiaro ny mpitsidika sy ny loharanon'ny valan-javaboary, ary ivon-toerana fitsidihana sy trano fidiovana maro no nihidy ary nakatona ny lalana noho ny toetr'andro. ”
Nasongadin'i Austin fa valan-javaboary maro no mijanona mivelatra amin'ny ampahany. Na dia mety tsara ho an'ny besinimaro sy ireo vondrom-piarahamonina misy vavahady izay miankina amin'ny mpitsidika ny valan-javaboary aza izany, dia mitera-doza ihany koa izany toy ny fampiasana tsy ara-dalàna ny loharanom-panaovan'ny valan-javaboary toy ny lasy tsy voafetra, ny fanorisorenana ny fiainana dia, ny fitondrana fiara tsy mataho-dalana, ny fako. ary fanimbazimbana.
"Eto no ahafahan'ny zaridainam-pirenena miaraka amin'ny orinasam-pitsangatsanganana matihanina mety ho safidy tsara indrindra," hoy i Austin. “Ireo mpitari-tafika tranainy anay dia voajanahary izay tsy mandalo fonosin'ny siligaoma raha tsy raisintsika. Raha mikatona ny lalana iray noho ny fahasimban'ny afo na ny fahitana ny bibidia mahery setra, manana safidy hafa isika. Matoky aho fa raha miatrika fanidiana valan-javaboary sasany toy izany izahay amin'ny ho avy, ny vondrona misy anay dia hanaraka ny kaody ambony indrindra amin'ny fitsipi-pitondrantena miverina miaraka amin'ny torolàlana mizara sy manome ohatra tsara ho an'ny rehetra. ”
"Matoky izahay fa hifarana tsy ho ela ny famaranana, ary hiverina hiverina amin'ny asany ny valan-javaboary miaraka amin'ny National Park voalohany tamin'ny 1872: 'Ho an'ny fifaliana sy ny fanatsarana ny vahoaka'," hoy i Austin. “Raha tsy mahazo politika dia mampalahelo sy tsy ilaina ny zava-misy ankehitriny. Ny hany olona maratra amin'izao fotoana izao dia ireo mpiasan'ny governemanta mirehitra sy ireo orinasa kely ao amin'ny Valan-javaboary misy antsika sy ny manodidina. Saingy nampanahy ny besinimaro ihany koa ny amin'ny mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny drafitry ny fialan-tsasatr'izy ireo. ”
Mijanona ny zava-misy, hoy i Austin, fa ny famandrihana fialan-tsasatra National Park izao dia mety ho fomba tsara iray hametrahana ny savorovoro eto amin'ny firenentsika. Tsara kokoa ny miandry mialoha ny fomba fijery mahatalanjona, fifamatorana ara-pianakaviana matanjaka kokoa, ary ny zava-mahadomelina mampihetsi-po.
Raha misy ny fanakatonana ny fanakatonana ataon'ny governemanta dia efa nanjary mora ampiasaina ny famoronana, ny fisokafana, ny hatsikana ary ny fanantenana. Ho fitsinjovana ny vondrom-piarahamonina, ny orinasa ary ny mpiasan'ny National Park Service izay manome anjara biriky lehibe amin'ny fanjakan'ny valan-javaboary any Andrefana, Austin dia manantena ny hamahana haingana ny vahaolana amin'ity governemanta ity farany.
Ny fatoriana Suriname dia mifoha amin'ny serivisy vaovao manerantany
Ny indostrian'ny fizahan-tany amerikana dia manery ny hanakatonana ny fanjakana